के पत्याउनु ?
सरकारले केही दिनअघि काठमाडौं उपत्यकामा विरोध प्रदर्शन र अनशनस्थल तोक्यो, त्यसलगत्तै डाक्टर केसीले अनशन शुरु गरिहाले । अनशन बस्नकै लागि उनी यसपटक जुम्ला पुगेका छन् । प्रहरीसँग केहीबेरको जुहारीपछि केसीले
वर्तमान सत्ता साझेदार दल (विगतका एमाले र माओवादी) गत मंसिरमा राम्रै साँठगाठका साथ चुनावमा होमिएका थिए । साँठगाठ राम्रै भएर हो क्यार कामदलले अपेक्षा ग¥या भन्दा बढी सिटमा कब्जा जमायो
असार १५ संस्कृति कि विकृति ?
हिजो असार १५। दही चिउरा खाने दिन । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने दिन । चाडपर्व उत्सव पनि कति रमाइलो । हुनेखानेलाई मजैले असार १५ लागेको देखियो । नहुने कन्त बिजोग
हुक्का र नकचरो युवती
पृथ्वी राजमार्ग अहिले विभिन्न कारणले चर्चामा रहने गरेको छ। कहिले दुर्घटना कहिले पहिरो कहिले मान्छेलाई सवारीले ठक्कर दिएर मार्ने कारण चर्चामा रहने गरेको छ। बिहीबार धरहराले आफ्नो दुरविन पृथ्वी राजमार्गको
पर्यटकका लागि नयाँ गन्तव्य
नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या कयौ गुणा बढाउने उद्धेश्यका साथ सरकारले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ घोषणा ग¥या छ । २ वर्षपछि २०२०मा कम्तिमा २० लाख पर्यटक नेपाल भि¥याउने लक्ष्यका साथ